NY ASA FAMPIANARANA
Ny asa ... fampianarana,
Dia asa iray tena miavaka ;
Ary koa tsy manavakavaka.
Dia asa iray tena mihaja ;
Misahana ny fanabeazana,
Olon-tsotra sy manan-kaja.
Asa mila fandavan-tena ;
Lazaina tsy ampihambana,
Toy ny asa ... fitsaboana ;
Andry iray tena hiankinana,
Mba hisian'ny fandrosoana.
Mila fiofanana manokana ;
Mba hisian'ny fivoarana,
Lafiny maro fa tsy tokana.
Asa iray nampandeferina ;
Faralahy tsy mba manana,
Fa ny teo ihany no naverina.
Raha jerena akaiky anefa,
Asa hiankinan'ny ho avy ;
Ka ao no tokony hiantefa,
Ny ezaky ny mpianakavy.
Ny tsy tokony ho hadino,
Na inona na inona lazaina ;
Na hino ianao na tsy hino,
Ny nianatra tsy ambakaina.
Koa raha tiana ny Firenena,
Omeo ny haja mendrika azy,
Ny mpampianatra mahonena,
Fa aza anaovana rainazy.
Date de dernière mise à jour : Mer 16 oct 2019